Ikhosi "yeLungelo lokushicilela" enomdla kuwe njengombhali | Uncwadi lwangoku
Ikhosi "yelungelo lokushicilela" elinokukunika umdla njengombhali
Ukongeza kufundo, inxenye yexesha lam lasimahla ndilinikezela ukukhangela iikhosi zasimahla ezinokuthi zibe negalelo kwinto endiyifundileyo okanye esele ndiyazi enkosi kwezinye iikhosi. Ukujonga iintsuku ezidlulileyo, ndafumana enye endicinga ukuba inokuba nomdla ngaphezu komnye kuni ongena rhoqo apha. Yikhosi evela kwiqonga lekhosi yasimahla ye-Miríada X.
Ikhosi endithetha ngayo inesihloko "Ilungelo lokushicilela". Okulandelayo, ndibeka ulwazi malunga nayo kunye nekhonkco kwimeko apho unomdla wokuyenza.
1 Inkcazo yekhosi kunye nolunye ulwazi
1.1 Idatha yekhosi
1.2 Iimodyuli zekhosi
Inkcazo yekhosi kunye nolunye ulwazi
Ikhosi yelungelo lokushicilela iphuhlisa isindululo esiqala ngokubonisa ezinye izinto ezisisiseko kwimvelaphi, ubume bezomthetho, iikhonsepthi kunye neendlela zokukhusela, emva koko kuphononongwe amalungelo ababhali bemisebenzi abanayo, kodwa noluntu ngokubanzi ngenxa yenkululeko yabo. isebenzisa, kwimeko yoluntu olunolwazi.
Umhla wo kuqala: 10 ngo-Oktobha (iqala ngomso).
Ixesha lekhosi: Iiveki ze4 (phantse iiyure ezingama-20 zokufunda).
Ifundiswa kwi Intsebenziswano kwiDyunivesithi yaseColombia.
Inqaku: 4/5 *
Utitshala: UPiedad Lucía Barreto Granada
Kule khosi unokufumana iimodyuli ezi-4 zizonke malunga nelungelo lokushicilela, kwaye zezi zilandelayo:
Imodyuli ye0: Intshayelelo yesihloko.
Imodyuli ye1 Yazi izibonelelo ezisisiseko zelungelo lokushicilela.
Imodyuli ye2 Ukulungelelaniswa kwamalungelo okuziphatha kunye nezoqoqosho.
Imodyuli ye3 Sebenzisa imigaqo evumela ukusetyenziswa ngokunyanisekileyo kwemisebenzi ukuba ixatyiswe.
Ungayithatha le khosi ubulele iividiyo ezilayishwe kwiYunivesithi yaseNtsebenziswano yaseColombia. Kananjalo uya kuba neforam yeentetho, amathandabuzo kunye nemibuzo onokuthi ubonisane nayo kwaye ucebise ngento ethile kubo bobabini utitshala wesifundo nakwabanye oogxa babo ababhalisele oko.
Ukuba unomdla kwaye ufuna ukufikelela kwaye uqale ngomso, nantsi unxibelelwano oya ngqo kule khosi.
Ndiyathemba ukuba uza kufumana into enomdla kwaye isombulule nakuphi na ukuthandabuza onokuba nako malunga nesihloko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ikhosi "yelungelo lokushicilela" elinokukunika umdla njengombhali
Ngaba unokwenza ingxelo ebhaliweyo?
Ukuhamba ukusuka eBerlin ukuya eBeijing ngeHelsinki kwiitrilogies ezintathu